The Conjuring3ရက်စွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေများ - ရုပ်ရှင်အသစ်တစ်ခုရှိပါသလား။ - ထိတ်လန့်
The Conjuring3ရက်စွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေများ - ရုပ်ရှင်အသစ်တစ်ခုရှိပါသလား။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ
LOS ANGELES, CA - ဇူလိုင် ၁၅ - မင်းသမီး Vera Farmiga သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Los Angeles ရှိ Cinerama Dome တွင် Warner Bros ၏ 'The Conjuring' ပြသမှုကိုပြသခဲ့သည်။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Sara ရာသီ ၂ ကိုအဘယ်သူသတ်ခဲ့သနည်း၊ လွှတ်ခြင်းနေ့၊ သွန်းခြင်း၊ အနှစ်ချုပ်၊ နောက်တွဲတွဲနှင့်အခြားအရာများ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မြွေရာသီ ၂ လာမည်လား။
The Conjuring ရုပ်ရှင်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသနည်း
အခုချိန်ထိရုပ်ရှင်နှစ်ကားရှိတယ် The Conjuring franchise ။ The Conjuring 2013 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်နှင့်2ပရိတ်သတ်များကတစ်ခါတစ်ရံတွင် Conjurverse ဟုရည်ညွှန်းသောမျှဝေထားသောရုပ်ရှင်ရုံစကြာ ၀ inာ၌လည်း spinoffs များစွာရှိသည်။ Annabelle ရုပ်ရှင်, သီလရှင် နှင့် la Llorona ၏ကျိန်စာ ။
The Conjuring ၏တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ရှိမလား?
စီးရီးအတွက်တတိယရုပ်ရှင် 2016 ကတည်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခဲ့ပေမယ့်အစောပိုင်း ရေတံခွန် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ ဂျိမ်းဝမ် | သူကပထမဇာတ်ကားနှစ်ခုနှင့်မတူသည်မှာသူသည်အခြားကတိကဝတ်များကြောင့်နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုညွှန်ကြားနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက်3တရားဝင်နှင့်အတူဇွန်လ 2017 ခုနှစ်တွင်ကြေညာခဲ့သည် la Llorona ၏ကျိန်စာ ဒါရိုက်တာမိုက်ကယ်ချားဗေ့စ်သည်စီမံကိန်းကိုပဲ့ကိုင်ရန်နှင့်ဒါရိုက်တာဒေးဗစ်လက်စလေဂျွန်ဆင်သည်ရုပ်ရှင်၏ဇာတ်ညွှန်းကိုရေးရန်ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
The Conjuring3သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး?
တရားဝင်ဖြန့်ချိထားသည့်ထုတ်လွှတ်မှုမရှိသေးပါ3။2၁၃၄ မိနစ်ခန့်ကြာချိန်နှင့်ပထမဆုံးစီးရီးမှာ ၁၁၂ မိနစ်ဖြစ်သည်။
တ ဦး တည်းခန့်မှန်းခဲ့ကြပါကယူဆရန်အန္တရာယ်ကင်းပါတယ် The Conjuring: မာရ်နတ်ကငါ့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ် ၎င်း၏အရင်အလားတူအရှည်ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
The Conjuring3သည်မည်သည့်အချိန်တွင်ရိုက်ကူးရမည်နည်း။
The Conjuring: မာရ်နတ်ကငါ့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ် စတင်ခဲ့သည် ထုတ်လုပ်မှု ၂၀၁၉ ဇွန် ၃ ရက်တွင် Vera Farmiga ကသူမအားဖော်ပြခဲ့သည် Instagram ၂၀၁၀ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင်သူမသည်သူမ၏မြင်ကွင်းများကိုပြီးဆုံးခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်အတွက်ရိုက်ကူးမှုကိုရက် ၈၀ အပြီးတွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
The Conjuring3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
The Conjuring: မာရ်နတ်ကငါ့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ် ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံ၌စတင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားသည်။ သို့သော် COVID-19 ကူးစက်မှုကြောင့်နှောင့်နှေးခဲ့သည်။ အခုတော့ရုပ်ရှင်က၎င်း၏ပါလိမ့်မယ် ပြဇာတ်ရုံပွဲ ဦး ထွက် ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၄ ရက်တွင်နောက်ထပ် ၀ န်ဆောင်ခမလိုဘဲ WarnerMedia ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်ပြဇာတ်ရုံထွက်လာပြီးနောက်တစ်လအကြာ HBO Max သို့လည်းစီးဆင်းသွားလိမ့်မည်။
Netflix ပေါ်ရှိ The Conjuring3သည်အဘယ်အချိန်တွင်ဖြစ်သနည်း။
ဒါဟာတကယ်တော့ဘယ်တော့မှအဖြစ်မည်သူမဆိုရဲ့ခန့်မှန်းပါတယ်3Netflix ပေါ်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည် streaming powerhouse သို့သွားရန်လမ်းကြောင်းရှိပါက၎င်းသည်ပြဇာတ်ရုံပြေးပြီးနောက်နှင့် VOD တွင်စစ်မှုထမ်းရန်အချိန်တိုအတွင်းထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
Netflix သို့မသွားဘဲ HBO Max တွင်အိမ်တစ်လုံးရှာရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ အများအပြား Warner Bros. တူသောခေါင်းစဉ်များ သဘောတရား ဒါကိုလုပ်နေကြတာပေါ့၊ ဒါကြောင့်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လာရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ The Conjuring: မာရ်နတ်ကငါ့ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်။
နောက်တစ်ခု:၂၀၂၂ မှ စတင်၍ Sony ရုပ်ရှင်အသစ်များသည် Netflix သို့ရောက်ရှိလာသည်
နှလုံး 12 ရာသီရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်
စုံထောက် pikachu netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်